संसदीय समितिले दियो ओली सरकारलाई यस्तो दनक, अब के गर्ला त सरकार ?
काठमाडौं । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेर नेपालको नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालसँग छलफलपछि समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हाे । समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री अर्यालले नेपालको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी समावेश भएको तर लिम्पियाधुरा क्षेत्र नभएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘सरकारले एउटा सन्दर्भ पारेर प्रकाशित गर्छ, यसका लागि डकुमेण्ट खाेजि गरिरहेको छ ।’समितिले नेपाली भूमिको रक्षा तथा कालापानी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुलाई सहज अाउन जान बाटो र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन भनेको छ । साथै भारतबाट अतिक्रमित भूमिमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक, कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले गृह, भूमिव्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयसहितका निकायहरुको संयुक्त समन्वयनकारी संयन्त्र निर्माण गरी एकीकृत रुपमा प्रभावकारी काम गर्न पनि भनेको छ । यसअघि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि सरकारलाई लिम्पियाधुरासहितको नक्शा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी थपेर बोर्डरमा प्रहरी बढाउने तयारी गरेको छ । यसले अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन मद्दत गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताए । थापाले शुक्रबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा लिम्पियाधुराको ३७२ र कालापानीको विवादास्पद ३२÷३३ गरेर ४०० बढी वर्गकिलोमिटर भारतले अतिक्रमण गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ‘यो अतिक्रमण सन् १९६२ भन्दा पहिले देखिन्न । भारत चीन युद्ध पश्चात अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । त्यसअगाडि यो भूभाग नेपालको थुप्रै प्रमाणहरु छन्’, उनले भने । भारत चीन युद्धका क्रममा भारतले १८ ठाउँमा सेना राख्यो । युद्धपछि १७ हटाएको भारतले कालापानीमा राखिराख्यो । ‘हुँदाहुँदा त्यो भूभाग भारतको हो भन्ने वैधानिक बनाउन नक्सा जारी गरे,’ उनले अघि भने, ‘यो क्षेत्र नेपालको हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । विगतका सरकारहरु पनि लड्दै आएका हुन् ।
अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा सफलता हात नपरेको भन्दै उनले अहिले नेपालको भूमि फिर्ता लिने अनुकुल स्थिति बनेको गृहमन्त्री बादलले बताए । सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गृहमन्त्री थापाकाअनुसार नेपाल र भारत सीमा क्षेत्र एक हजार ८०० किलोमिटर भएको मानिन्छ । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ र १०२ वटा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) छ । तर सीमा क्षेत्रमा नेपालका बीओपीको दुरी करिव २५÷३० किलोमिटरमा छ । कालापानी क्षेत्रमा त बीओपी सीमा नजिकै पनि छैन । जबकी भारतले हरेक किलोमिटरमा बीओपी राखेको छ र, ठूलो संख्यामा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) खटाएको छ । सेना र गोर्खा राइफल्स पनि खटिएका छन् । भारतलाई काउन्टर दिन अब सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी थपेर बीओपी थप्ने गृहमन्त्रीले बताए । सशस्त्र प्रहरी करिव ३७ हजार संख्या छ । यो सीमा सुरक्षा गर्न पर्याप्त देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले सशस्त्रको दरबन्दी विस्तार गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।’ बोर्डर आउट पोष्ट पनि ६०/७० वटा पनि थप्न गृहकार्य भइरहेको मन्त्री थापाले बताए । दार्चुलामा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म रहे पनि सीमानजिकै सशस्त्र प्रहरी राख्न नसकिएको भन्दै उनले त्यसको एउटा समस्या सडक भएको बताए । नेपाली भूभागमा जान समेत भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । गृहमन्त्री थापाले अब नेपाली भूभागबाट जाने सकिने गरी बाटो बनाउने र गुल्ममा रहेका सशस्त्र प्रहरीलाई सात ठाउँमा विस्तार गर्ने योजना बनाएकाे बताए ।
याे पनि पढ्नुहाेस् - यो हो नेपालको बास्तबिक नक्सा, सरकारी चासो बिना तयार
भारतले एकलाैटीरूपमा आफ्नो राजनैतिक नकसा सार्बजनिक गरि नेपालको भुभाग समेत आफ्नो सिमा भित्र देखाएको छ। यस्को बिरोधमा देशैभर ब्यापक प्रदर्शण भैरहेकाछन । यस्ताे जनदवाबका बिच पनि सरकारले अाफ्नो भुभाग समेटिएको आधिकारीक नक्सा सार्बजनिक गर्न सकेको छैन । नक्सा सुधारकोलागि न त भारत संग आैपचारीक पहल नै गरिएको छ न त समयमा नै बिरोध सरकारले जनाउन सक्यो । केहि दिन अधि प्रभानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलिय सहमती अनुरूप हालै सरकारले एउटा कुटनैतिक नोट पठाउने बाहेक अनय कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । यस्नातो बेलामा गरिक समाज तथा नेपाल भारतका सिमा बिज्ञहरूले नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेका छन । नागरिकस्तरमा गठन गरिएको सीमा बचाऊ अभियानले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी समितिले नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। नक्सा तयारबारे जानकारी दिँदै अभियानका प्रा. डा. नरेन्द्रराज खनालले विज्ञका हिसाबले नदीको रेखांकन गरिएको बताए। ‘डिजिटल एलिभेसन मोडेलबाट रेखांकन गरेका हौं।’ सीमा बचाऊ अभियानको नक्सा समितिका विज्ञ कोमलचन्द्र बरालले लिम्पियाधुरालाई पश्चिमी नेपालको सीमा मानेर नक्सा तयार पारिएकाले यसलाई विश्वव्यापी बनाउने जानकारी दिए। अब नेपाल सरकारले यसैलाए प्रमाणिक नक्सा मानेर देशको भुमी गुम्न नदिन कुटनैतिक पहल गर्नु देशको हितमा हुने छ ।
किताकाट नापी कार्यालयमा बसेर रकम कुम्ल्याउन पल्केका यस्का महानिर्देशकहरूले देशको मुलनक्सा हालसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । जनस्तरमा लिपुलेक, कलापानी हाम्रो हो भनेर सडक तताईरहेको अबस्थामा पनि उपलब्ध प्रमाणको आधारमा हाम्रो वास्तविक नक्सा यो हो भनेर सार्वजनीक गर्न सकेको छैन । न त सरबारले नै बिश्व सामु नक्सा देखाउने अबस्था छ । त्यसैले नापी बिभाग कानमा तेल हालेर सुतेको छ ।
के नेपालले आफ्नो नक्सा तयार गरेको छ त?
यस्को स्पष्ट जबाफ न सरकार संग छ न त नापी बिभाग वा अन्य निकाय संग नै छ । सब एकले अर्कालाइ देखाउने मात्र हुन, जिम्मेवारी बोध कसैसंग पनि छैन । हामी, हाम नागरिक पनि आफ्नो आधिकारीक नक्सा बिना नै भारतले बनाएको नक्साको आधारमा सडक तताइरहेका छाै ।
साना-साना किताकाट, जालझेलबाट सरकारी जग्गालाई द्रव्यको प्रलोभनको आधारमा ब्यक्तीको नाममा बनाउने धृणीत काममा संलग्न हुने यस्ता बिभाग हाकेर बस्ने हाकिमलाई देशको सिमा नक्साको चासो हुने कुरा पनि भएन । भारतमा यस्ता राष्ट्रियता जोडिएको नक्साकन गर्ने कार्य सेनाले गर्छ, ब्यक्तिगत नक्सा सिभिल नापीले गर्छ । उदाहरण हालै जारि गरिएको भारतको बिबादास्पद नक्सा लेफ्टिनेन्ट जनरलले जारि गरेका छन । पेसागत हिसाबमा पनि सिमा सुरक्षाको दायित्व सेनामा आईपर्छ। तेसैले भारतमा सिमा नक्साँकनको काम सेना अन्तरगतको बिभागले गर्छ ।
नेपालको आफ्नो नक्सा तयार नहुनुको दोषी को ?
यस्को स्पष्ट जबाफ न सरकार संग छ न त नापी बिभाग वा अन्य निकाय संग नै छ । सब एकले अर्कालाइ देखाउने मात्र हुन, जिम्मेवारी बोध कसैसंग पनि छैन । हामी, अाम नागरिक पनि आफ्नो आधिकारीक नक्सा बिना नै भारतले बनाएको नक्साको आधारमा सडक तताइरहेका छाै ।
भारतका संपुर्ण सिमाको रेखदेख र नियत्रण "सिमा प्रहरी" "अतिरिक्त फोर्स" वा अन्य अर्धसैनिक संरचनाले गर्छ । नागरिक प्रसासन प्रमुखको यस्मा विशेष हात रहन्न । उस्ले सिमा आरपार छलफलमा सहजकर्ता बन्ने मात्र हो । नेपालमा यो काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको । सिमा प्रसशासन र नागरिक प्रशासन फरक चरित्रको काम हो भन्ने कुरा नेपालका नीति निर्माता, चिन्तक र सरकारले बुझ्न सकेका छैनन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला भित्र स्थिती नियत्रणमा लिन त जानेका हुन्छन तर सिमा प्रसासन जस्तो नितान्त प्राबिधिक काममा यिन्को ज्ञानको स्तरको कमी तथा अनुभबको अभाबमा फाईल केलाउने र आफु अगाडीका प्रसासकले जे गरे, तेसैको कपिपेष्ट रिपोर्ट माथी पठाउने बाहेक केही हुन्न ।
बेलाबेलामा यस्ता अल्पकालिन बिबाद सामधान गर्न दुईदेशीय छलफल आयोजना भै नै रहेका छन । यस्ता छलफलमा हाम्रा प्राबिधिक ज्ञान बिनाका जनप्रशासकले भाग लिएर देशले के उपलब्धीको आश गर्ने । यस्ता प्रशासकले छलफलमा भाग लिने, मेजमानी खाने/खुवाउने , भता बुझने र देशको अस्मिता खुम्चने दस्ताबेजमा सहमती जनाएर आउने मात्र हुन
थप समाचार - नक्सा काण्ड दोषी भनेको सिमा प्रसासन
कालापानी विवादबारे चीन बोल्यो
निशान छापमै नेपालको नक्सा गलत, सरकार भन्छ- गुगलबाट तान्दा यस्तो भयो
नक्सा विवादबारे सिरहामा भारत सरकार विरुद्ध प्रदर्शन
अतिक्रमित नक्सा : भारतले नेपालको सिमा मिचेको बारे रबि लामिछाने आक्रोश, लेखे यस्ताे कडा स्टाटस
भारतमा ब्रिटिस हुँदा निकालेको नक्सा बीबीसीले बाहिर ल्याएपछि विश्वभरी तहल्का, मोदी तनाबमा
यस्ताे पाे रैछ नेपालको खास नक्सा
भारतीय अधिकारीको दाबी : कालापानी पहिलादेखि नै भारतको नक्सामा छ
नक्सा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले बोलाए सर्वपक्षीय बैठक
भारतलाई इन्काउन्टर : लिम्पियाधुरासहितको नेपाली नक्सा सार्बजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन !
नक्सा विरुद्ध प्रदर्शनकाे भिडियाे खिचेकाे भन्दै पत्रकार बराल पक्राउ
अतिक्रमित नक्साबारे मन्त्री बाँस्कोटाको चेतावनी: कसैले बलको तागत नदेखाए हुन्छ
नेपालले भारतिय नयाँ नक्साको कडा बिरोध गरेकै बेला पाकिस्तानले दियो भारतलाई फेरी यस्तो कडा चेतावनी
नक्सा अतिक्रमणविरुद्ध विश्वभर विरोध, मलेसिया र युरोपबाट आयो यस्तो डर लाग्दाे चेतावनी
नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमा परिमार्जन नभएको भारतको दाबी
अतिक्रमित नक्सा : दशगजा क्षेत्रमै गएर भारत विरुद्ध प्रदर्शन
नक्साबारे भारतले भन्यो – ‘लिपुलेक हाम्रै हो, नेपालले नमाने केही फरक पर्दैन’
अतिक्रमित नक्सा : भारतविरुद्ध के-के छापिए आजका पत्रपत्रिकामा ?
अतिक्रमित नक्सा : राज्यव्यवस्थाले प्रधानमन्त्री बोलाउने
भारतले भन्यो : नयाँ नक्सामा नेपालको कुनै पनि भूमि राखिएको छैन
अतिक्रमित नक्सा : परराष्ट्र मन्त्रालयले निकाल्यो बेनामे विज्ञप्ति, नाम, हस्ताक्षर, पद अनि दर्ता नं. खै त ?
अतिक्रमित नक्सा : नेपाल सरकारले भन्यो, कालापानी हाम्रो हो( विज्ञप्तिसहित )
नेपालको पक्षमा पाकिस्तान : भारतको नयाँ नक्सालाई अस्वीकार गर्ने !
अतिक्रमित नक्सा : लिपुलेकमा भारतीय हस्तक्षेपबारे नायिका रेखा थापाकाे यस्तो कडा स्ट्याटस
अतिक्रमित नक्सा : कालापानी र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा राखेपछि चिरत्र्जीवी आक्रोशित
भारतीय दादागिरी कालापानी र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा राखेपछि थपलिया आक्रोशित
भारतले कालापानी र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा राखेपछि बैद्य आक्रोशित( विज्ञप्तिसहित )
अतिक्रमित नक्सा : विप्लवले प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाऊँदै, सयुक्त राष्ट्रसंघमा ध्यानाकर्षण गराउने !
भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साप्रति कांग्रेसको आपत्ति
भारतको नयाँ नक्सा : पाकिस्तानद्वारा अस्वीकार
नेपालको नक्सा समेत भारतीय सरकारले बनाइदिन्छ: मोहन वैद्य
सुदूर अछामको आकाशमा भारतका दर्जनौ फाइटर विमान, किन मौन छ नेपाल सरकार , स्थानीय त्रसित ?
भारतीय हस्तक्षेपको बिरोधमा इलामको मंगलबारेमा प्रदर्शन
नेपाल देशको नक्सा जथाभावी बनेपछी.. ...
बल्ल तात्यो सेना, विवादित सिमा अध्ययन गर्ने !
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताब : नेपालको तर्फ बाट भारतसँग माधब नेपालले वार्ता गरुन !
मोदीजी बरु गर्धन छिनिएला तर लिपुलेक-कालापानी छोड्दैनौं
प्रचण्ड : सुन्दर देशको सुन्दर दिमाग भएको सुन्दर नेता - बंगलादेशका राष्ट्रपति
सीमाका बासिन्दालाई बाटो छैन